इलामलाई ३ अर्ब ३८ करोड २६ लाख बजेट, कुन स्थानीय तहमा कुन शीर्षकमा कति बजेट ? (तालिका सहित हेर्नुस्) - Nayabulanda.com
सबैभन्दा धेरै सूर्योदय नगरपालिका र कम माङसेबुङ गाउँपालिकालाई
राम योङहाङ १९ जेष्ठ २०७७, सोमबार १७:५८ 1397 पटक हेरिएको
इलाम : संघीय सरकारले इलामको विकासलाई १० वटै स्थानीय तहले खर्च गर्ने गरी ३ अर्ब ३८ करोड २६ लाख रुपैयाँ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७।७८ का लागि इलामका १० वटै स्थानीयत तहलाई समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपुरक अनुदान गरेर ३ अर्ब ३८ करोड २६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको हो ।
आगामी वर्षका लागि समानीकरण अनुदानतर्फ १ अर्ब ८ करोड ९१ लाख, सशर्त अनुदान तर्फ २ अर्व १५ करोड ७० लाख, विशेष अनुदान तर्फ ६ करोड ७० लाख र समपुरक अनुदानतर्फ ६ करोड ९५ लाख विनियोजन गरेको छ ।
गत वर्ष इलामका स्थानीय तहले २ अर्व ७६ करोड २६ लाख रकम पाएका थिए । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष ६० करोड बढी बजेट विनियोजन भएको हो । सरकारले सबैभन्दा धेरै बजेट सूर्योदय नगरपालिकालाई ५२ करोड १७ लाख रुपैयाँ दिएको छ । सवैभन्दा कम माङसेबुङ गाउँपालिकालाई दिएको छ। माङसेबुङ गाउँपालिकामा २३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ विनियोन गरेको छ ।
अन्तर सरकारी वित्तिय हस्तान्तरण (स्थानीय तह)
चार वटा नगरपालिकामा १ अर्ब ७४ करोड ४६ लाख बजेट विनियोजन भएको छ भने ६ वटा गाउँपालिकामा १ अर्व ६३ करोड ८० लाख विनियोजन भएको छ ।
इलाममा सवैभन्दा बढी सूर्योदय नगरपालिकामा बजेट विनियोजन भएको छ । नगरपालिकामध्ये सवैभन्दा कम माईनगरपालिकामा बजेट विनियोजन भएको छ । सूर्योदय नगरपालिकामा वित्तीय समानीकरण शिर्षक अन्तर्गत १६ करोड ८ लाख, सशर्त अनुदान शीर्षक अन्तर्गत ३४ करोड ८९ लाख र समपुरक अनुदान १ करोड २० लाख गरी ५२ करोड २७ लाख विनियोजन भएको छ । माई नगरपालिकामा वित्तीय समानीकरण शीर्षक अन्तर्गत ११ करोड ९० लाख र सशर्त अनुदान शीर्षक अन्तर्गत १९ करोड ५९ लाख र विशेष अनुदानतर्फ ५० लाख रुपैयाँ गरी ३१ करोड ९९ लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।
यस्तै इलाम नगरपालिकामा वित्तीय समानीकरण शीर्षक अन्तर्ग १४ करोड ९१ लाख र सशर्त अनुदान अन्तर्गत ३३ करोड ७५ लाख गरी ४८ करोड ६६ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । देउमाई नगरपालिकाको बजेट ४१ करोड ६४ लाख रहेको छ । वितीय समानीकरण अन्तर्गत ११ करोड ८२ लाख, सशर्त अनुदान अन्तर्गत २६ करोड ५० लाख, विषेश अनुदान अन्तर्गत १ करोड लाख र समपुरक अनुदान अन्तर्गत २ करोड ५२ लाख विनियोजन भएको छ ।
गाउँपालिका अन्तर्गत सवैभन्दा बढी माईजोगमाई गाउँपालिकामा बजेट परेको छ । माईजोगमाईमा ३१ करोड ८२ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । वित्तिय समानकिरण शीर्षक अन्तर्गत ९ करोड ४१ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ १९ करोड ४१ लाख, विशेष अनुदानतर्फ २ करोड २० लाख र समपूरक अनुदान अन्तरगत ८० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । सवैभन्दा कम माङसेबुङ गाउँपालिकामा बजेट विनियोजन भएको छ । माङसेबुङमा वित्तीय समानीकरण अन्तर्गत ८ करोड ७८ लाख र सशर्त अनुदान अन्तर्गत १४ करोड ६९ लाख गरी २३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
फाकफोकथुम गाउँपालिकामा वित्तीय समानीकरण अन्तर्गत ९ करोड ६७ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ २० करोड ६९ लाख र विशेष अनुदान अन्तर्गत १ करोड गरी ३१ करोड २६ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । रोङ गाउँपालिकामा २७ करोड ९३ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । रोङमा वित्तीय समानीकरण अन्तर्गत ७ करोड ७२ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ १६ करोड ९४ लाख, विशेष अनुदान अन्तर्गत १ करोड र समपूरक अनुदान अन्तरगत १ करोड २७ लाख गरी २७ करोड ९३ लाख विनियोजन गरेको छ ।
यस्तै चुलाचुली गाउँपालिकामा वित्तीय समानीकरण अन्तर्गत ९ करोड ५३ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ १५ करोड १५ लाख र समपूरक अनुदान अन्तर्गत ५६ लाख गरी २५ करोड २४ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । सन्दकपुर गाउँपालिकामा २३ करोड ९८ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । सन्दकपुरमा वित्तीय समानीकरण अन्तर्गत ७ करोड ९ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ १४ करोड ९ लाख, विशेष अनुदान अन्तर्गत १ करोड र समपूरक अनुदान अन्तरगत ८० लाख गरी २३ करोड ९८ लाख विनियोजन गरेको छ ।